Awooda ayaa u kordhin doonta 3 iyada oo maalgashiga dekeda cusub ay bilawday TCDD gudaha Izmir Port | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirAwoodda ayaa kor u qaadi doonta 3 iyadoo la isticmaalayo maalgashi cusub oo dekedda dekedda ah ee TCDD ay ku leedahay Dekedda
Awoodda ayaa kor u qaadi doonta 3 iyadoo la isticmaalayo maalgashi cusub oo dekedda dekedda ah ee TCDD ay ku leedahay Dekedda
06 / 05 / 2012 35 Izmir, DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Waxaa la og yahay sida dekedda dhoofinta ugu weyn ee Turkiga ee la soo dhaafay, laakiin habka gaar dhiigga laga badiyay sabab u failure in ay maal-dekedda weel cusub ee Izmir bilaabay maalgashiga TCDD in awoodda dekedda noqon doonaa 3 dabaqa. Iyada oo maalgashigaas oo ay bilaabeen shaqooyinka buuxinaya, barkiisku wuxuu awoodi doonaa inuu u adeego markabka 16 waqti isku mid ah.
Dekedda Berbera wuxuu u kala qaybsamey laba rukumo iyo rakaab hawleedka dhexdood ah oo ku jira baaxadda dib-u-habeynta.
Sanadkii la soo dhaafay, 273 markab xamuul ah oo ka socda markabka xamuulka ah ee 498 ee dekedda shaqa-bixinta ayaa sii socota, halka awoodda lagu kordhinayo awoodda dekadda xamuulka ah.
Sannadki sannadkii hore, 690 Kun Mashruuca 9 million 504 kun tan oo xamuul ah iyo 90 million pounds ee dekedda xamuulka ee 18 million pounds investment, ayaa 2012 ku darsaday miisaaniyadda 88 million dollars.
Talaabada koowaad ee ku jirta baaxadda barnaamijka, kaas oo saddex-laabaya awoodda dekadda, ayaa la qaaday iyadoo la buuxinayo agagaarka cawska cusub. Kaneecada cusub iyo mashiinada waxaa lagu dari doonaa aagga 110, oo lagu guuleysan doono shaqada la qorsheeyay in la dhammaystiro sanadkan dambe.
2013-2015 300 ayaa qorsheysnaa muddadaas iyada oo la maalgelinayo malaayiin doolar oo ku yaala dekedda 2. Qeybta Maareynta Konteynarada waxaa la dhisi doonaa. 429 kun mitir oo laba jibbaaran oo dhul-beereed ah ayaa lagu guuleysan doonaa buuxinta xirmooyinka 750 iyo 550 kun mitir oo laba jibbaaran dibedda ayaa lagu guuleysan doonaa. Dekedda İzmir, oo wali u adeegi karta markab 7 leh kiriimyada si loogu rakibo aaggan, waxay awoodi doonaan inay u adeegaan markabka 16 isla markaa.
Maraakiibta waawayn ayaa sidoo kale iman doona
Marka la sheego in awoodda wax lagu qabsado ee dekedda, oo haatan 830 Mashruucan 1000, waxay kordhin doontaa 2 million 500 kun Mashruuc oo leh dhamaystirka gundhigga labaad ee weelka.
Masuuliyiintu waxay xuseen in Gacanka Iiraan uu ciriiri ku yahay maraakiibta waawayn, iyo in qiyaasta mitirka 14, dhererka kilomitir 14 iyo mitirka mitirka 250 laga furi doono albaabka dekedda Gacanka ee dhinaca dekedda. ayuu yidhi.
152 million pounds ayaa la saadaalinayaa in la dhameeyo mashruuca sanadka 2014 waxaa la rajeynayaa in lagu dhameeyo saraakiisha dekedaha ee Izmir, dhamaystirka kanaalkan iyada oo la dhameeystirayo awoodda mitirka 200 illaa maraakiibta 4 kun ee maraakiibta maraakiibta xamuulka ah ayaa hadda ku xiri kara mitirka 350 oo leh awoodda 10 kun.
Masuuliyiinta dekedda ayaa baaraya tayada dhoobada si loo soo saaro mashruuca biyaha wabiga ah. Qaybtu waxay sheegtey in loo adeegsan doono shaqaynta buuxinta Terminal Terminal. Si loo go'aamiyo tayada dhulka iyo dhererka hoose ee mashruuca, daraasadda ayaa sii socotay, faahfaahinta mashruuca waxaa lagu go'aamiyaa dhamaadka sannadka.
Tani maalgashiga dekedda leh ee Izmir mar kale, Turkey ayaa leh awoodda ah masuuliyiinta in ay soo jiidan doonaan dareenka si ay u noqdaan dekedda weel, maxaa yeelay, mar dambe ma ay maal karaa ee la soo dhaafay dekedda ee Izmir weelasha lagu faray in ay dekedda kale ee Port ugu weyn ka hadlay in ay ka filayaan hanuuninta.
Izmir waa meel aad u habboon in la eego xamuulka dekedda iyo gaadiidka, in dareen this ma noqon karaan tartamayaal in Izmir dekedda lahayn, Turkey ayaa sannadka soo 2023 500 billion dollars of dhoofiyo oo dhan dekedaha ee gobolka lacala xaqiijinta goolka awood buuxda u shaqayn karin, a cross-dekedda dareen this Waxaa sidoo kale lagu nuuxnuuxsaday in tartanka uu ka maqan yahay su'aasha.
"Qaybta Isbaanishku waxay kordhin doontaa qadarin"
Geza Dologh, Guddoomiyaha Laanta Izmir ee Hantidhawrka Gaadiidka, ayaa sheegay in maalgashigaas, mustaqbalka dekedda Izmir la xaqiijiyay.
Wasiirka Gaadiidka, Isgaarsiinta Badda iyo Isgaadhsiinta Binali Yildirim, Dekedda İzmir ee maalgashiga muddada gaaban ayaa la dhammeystirey, maalgelinta dhexdhexaadka ah ayaa bilaabay diiwaangelinta Dooxa, dhamaystirka maalgalintan sanadkan 2015 waxay saadaalisay in dekaddu iman doonto dareen weyn oo caalami ah.
Dologna waxa ay sheegtay in maalgashiga la'aanta maalgashiga ah ee dekedda Izmir, maraakiibta qaarkood ay doorbideen dekedaha Aliaga horay, laakiin tani maaha wax xun.
"Sidaa darteed, dekadaha Aliağa waa dekadaha magaalada İzmir. Waxay ahayd mid wanaagsan in ay jireen dekedaha Aliağa xilliga ciriiriga. Haddii kale, waxaa jiri lahaa dhibaato weyn. Tirooyinka suuq galka ayaa si dhaqso leh u kordhaya. Waxaa jiri doona mug ku filan oo loogu talagalay dhamaan dekadaha oo ku yaala Izmir mustaqbalka. Waxaa jiri doona tartan macquul ah oo u dhexeeya dekadahaas. Markaad eegto wadarta dekadaha ku yaalla İzmir iyo Aliağa sannadkii hore, waxaad arki doontaa kor u kaca 10 inta xaddidan. Kororka kor u kaca ayaa kor u qaadi doona macaamilka İzmir ee Dekedda Berbera.
Si loo kansal gareeyo tramramka tram ee Dolmuşçılar ee Bursa…
tareenka weel block la bilaabay dhexeeya duulimaad Turkey iyo Hungary
Ineszmir Mashruuca Xirmooyinka Wadooyinka Magaalada Metropolitan -Karşıyaka Khadka taraamka…
Armaajada Teknoloojiyada ee Tunnelliyada ayaa maalgelin ku sameeya awoodda
Tifaftirka TARSAN ee Suuriya
TCDD 6. Daaqada ay samaysay Maamul-goboleedka waxaa la furay
Qalabka hoostiisa ee dhismaha ee TCDD ayaa weli aan lala socon
Ogeysiiska Qandaraaska: Qalabaynta Qalabka Kontoroolka Qalabka Kicis ee Dekedda Iskudhiga leh ee Kaamirada
TCDD Edirne - Suuragalnimada Mashruuca Tareenka Xawaaraha Xawaaraha ee Xawaaraha Sare oo ay Diyaariyeen Ergada Shiinaha…
Si loo sameeyo baabuurka cusub ee fiilada korantada ah ee Bursa, 250 xamuul oo rar ah ayaa laga keenay Talyaaniga…
Mashruuca New Boulevard ee lagu bilaabay Serdivan ayaa sii socota
TCDD waxa ay bartilmaameedsanaysaa shabakada xadiidka 26 kun kilomitir